Imifekethiso yekhompyutha → Imifekethiso yezingubo ze-Computer / P & M
Ukufekethiswa kwekhompyutha kungenye yezindlela ezibonakalayo zokumaka izingubo nezindwangu. Kungenxa yomlando wayo osukela emakhulwini eminyaka edlule, lapho endulo abesifazane bahlobisa amaphethini ezindwangu ngesandla.
Kulezi zinsuku, ukufekethiswa kusetshenziswa ngokuzenzakalela kusetshenziswa umshini olawulwa yikhompyutha ngesisekelo sohlelo lokufekethiswa, olwenzelwe ngawodwana ukwakheka ngakunye kwemidwebo.
Imiklamo emincane ezindwangu enesisindo esikhulu kunaleyo yesikibha sendabuko ibukeka kahle kakhulu. Izingubo ezenziwe ngezifiso zinezinzuzo eziningi. Umkhiqizo onjalo ugqame emncintiswaneni, uqinisa isithunzi senkampani futhi wakhe umqondo womphakathi phakathi kweqembu uma kunezingubo zokusebenza.
Imifekethiso yekhompyutha yenziwa ezingutsheni nasezindwangu
Imifekethiso yekhompyutha ingasetshenziswa ngesibindi ekukhiqizweni kwamagajethi endwangu izingubo zokukhangisa. I-logo ehlanganisiwe negama lenkampani ku-polówkach, izikhwama noma amathawula kungaba isipho esihle kumakhasimende noma kubalingani bebhizinisi. Ngokusebenzisa leyo mikhiqizo yezingubo noma yokukhangisa, bazothuthukisa umkhiqizo.
Ngaphezu kwezingubo, imifekethiso ivame ukwenziwa emikhiqizweni efana nezikhwama, izigqoko, amathawula namabhavu okugeza. I-logo efekethisiwe inamandla impela futhi iyamelana nokuxhashazwa kunezinye izindlela zokumaka ngemidwebo yokunamathela.
Isiko lokufekethiswa kwekhompyutha
Ukuboshwa kuyindlela yokuhlobisa eyayaziwa endulo, lapho abesifazane befekethisa amaphethini ezingutsheni, izindwangu zetafula kanye namafulegi ngesandla. Ubukhazikhazi nokuqina kokufakwa emakhazeni kubenze baba yinto yamasiko amaningi, kanye nophawu lwezifunda ezithile ngesimo semvunulo yabantu namabhanela.
Ikhwalithi ephezulu nokuqina kokumaka imifekethiso nakho kutholile uhlelo lokusebenza ekukhangiseni kwanamuhla. Abasebenzi abagqoke izingubo ezinophawu lwenkampani bavame ukuthathwa njengabamele izinkampani ezinokwethenjelwa hhayi ezingaziwa. Futhi izindwangu zehhotela ngendlela yamathawula noma ama-bathrobes anelogo zandisa udumo lwehhotela.
Ama-waiter kanye nama-restaurateurs ahlonyiswe ngezindwangu ezenziwe ngezifiso ezifana nama-aprons noma ama-apron nawo abonwa njengokuhambisana nomkhiqizo, futhi ngaleyo ndlela kukhuthaza ukwethembana okukhulu, okuvame ukuhumusha kube izinqumo zokuthenga kwamakhasimende. Okufekethisiwe nakho kuyizinto zokukhangisa ezitholwa ngokuqinisekile.
Amagajethi ahlobisiwe ngesimo sezikhwama, amakepisi, izikibha avame ukusetshenziswa emincintiswaneni ehlelwe yizinkampani njengengxenye yokuphakanyiswa kwayo noma njengezipho zamahhala zamakhasimende.
Ipaki yemishini yokuhlobisa amakhompyutha
Ubuchwepheshe besimanje namathuba amanje asivumela ukuba sihlangabezane nesidingo esikhulayo semakethe semikhiqizo efekethisiwe. Ngenxa yemishini yesimanje, namuhla kungenzeka ukwenza izinkulungwane zemifekethiso ngesikhathi esifushane ngenkathi kugcinwa ukunemba komklamo. Lokhu kuthuthukiswa kwezomnotho nakho kuhumusha kube yintengo ekhangayo yokufekethiswa.
Imifekethiso yekhompyutha - ubuchwepheshe esinabo
Imishini yanamuhla iqukethe izinaliti eziningi zokufaka imibala yemicu efanele iphrojekthi. Inqubo yokufekethiswa iphathwa uhlelo lwekhompyutha lapho ukwakheka kulayishwa khona. Kuseceleni kwethu ukunquma indawo efanelekile yokusebenzisa okufekethisiwe nosayizi waso. Kunconyelwa imifekethiso kumaphrojekthi amancane, yingakho kuthandwa kwawo kwama-logo wokuphrinta, amagama ezinkampani, izikhungo nezikole.
Izinzuzo nobubi bokufakwa kwe-computer
Ukuvela kwezingubo ezinemifuziselo yinto eyenza ukuthi igqame. Okufekethisiwe okwenziwe kahle kunikeza izindwangu ikhwalithi nobuhle obusha, futhi uhlobo lomkhiqizo olukhangiswa nguye luthola udumo. Akunasidingo sokukhathazeka ukuthi ihluzo noma umbhalo uzosuswa ekuhlanzweni noma ngemuva kwesikhathi eside sokusetshenziswa.
Imifekethiso yekhompyutha iyingxenye ebalulekile yezingubo ngakho-ke inenzuzo enkulu kunezinye izindlela ezihlutshiwe noma izimbotshana zakhiwa ngokunqunywa kancane kancane. Imifekethiso yekhompyutha ingaba cishe ngawo wonke umbala. Umkhawulo kuphela umbala wentambo esetshenzisiwe.
Ukufekethiswa kwenziwa ngokunemba kokuhlinzwa ngenxa yokulawulwa kwekhompyutha. Ubuciko nokunemba kokufakwa kwe-computer kuvumela ukulungiswa okuphezulu kwamaphethini afekethisiwe. Imifekethiso imane ikhokhe ngemiqulu emikhulu.
Inzuzo eyengeziwe izindleko zesikhathi esisodwa zokulungiselela uhlelo lokufekethiswa, oluhlala ku-database yethu kokuhle. Ngakho-ke, ngokuzayo, uma ikhasimende libuyela uku-oda kabusha izingubo ngomklamo ofanayo, lizokhululwa emalini ekhokhwayo yohlelo.
Ukufekethiswa kwekhompyutha nakho kunenkinga, kepha kungagwenywa ngokukhetha indlela efanelekile yokumaka yohlobo lwento nokuklanywa. Kungakho kunconywa ukuthi uthinte ochwepheshe ngaphambi kokuyalela ukumaka kwakho kokuqala ukugwema ukukhubazeka okungaba khona.
Ngokuphikisana nokuphrinta kwekhompyutha okugcwele, imidwebo efekethisiwe ayinakusetshenziswa ukuthunga imidwebo ephelele ngobubanzi obungenamkhawulo bemibala.
Noma kunjalo, lokhu akuyona into emayelana nayo. Ukufekethiswa kubhekiswa esikweni ngoba kufana namajazi wezingubo ezihlobisa izingubo ezinhle. Akuhlangene nemidwebo kitschy, egezekayo.
Imifekethiso ayinconywa ukuthi ifakwe efekethweni ngezinto ezinolimi oluphansi ezingeqi ku-190 g / m2. Ukufekethiswa okukhulu kuzonikeza umbono wokuthi "isihlangu", kuzoguquka ngesikhathi sokusetshenziswa, futhi uma kufakwa entweni ezacile - izinaliti zingabhoboza okomzimba omncane.
Ukufakelwa kwekhompyutha ngezindwangu ezisezingeni eliphansi ezinesisindo esiphansi akunakubotshwa. Kucatshangwa ukuthi uhlelo lolimi lwezindwangu kufanele lube ngaphezu kwe-190 g / m2. Kodwa-ke, kunzima ngisho nokucabanga nge-logo efekethisiwe kwi-Tack-Tack shirt encane kangangokuba konke kukhombisa ngayo.
Kubiza malini ukufakelwa kwekhompyutha?
Ukufekethiswa kwekhompyutha kuqhathaniswa kwezomnotho. Kodwa-ke, kunezici eziningana ezidlala indima ekulinganisweni okunembile. Ngayodwana, ukufekethiswa kushibhile lapho u-oda imikhiqizo eminingi. Ngaphezu kwalokho, ubukhulu bokufekethiswa nobunzima behluzo bunomthelela omkhulu entengo, okuhumushela ekulinganisweni kobungako bemifekethiso. Okukhudlwana kokufekethiswa, ukugoqa okuningana, ukuhlanganiswa kukhulu nosayizi, imidwebo iminyene kakhulu. Futhi, inani lezindawo lapho kuzofakwa khona imifekethiso (isb. Ilogo ngaphambili esifubeni sesobunxele + ilogo maphakathi emuva) ibalulekile entengo yeyunithi. Intengo imvamisa ayithonywa inani lemibala esetshenzisiwe, njengoba umshini wokuthunga unezintambo eziningi. Izindleko zokulungiselela kufanele zengezwe ku-oda lokuqala lokufekethiswa uhlelo efekethisiweesivele isendaweni yethu yokugcina imininingwane ngakho-ke ayengezwa kuma-oda alandelayo.
ukugqokwa kwamakhompyuthaimifekethiso ezingutsheniIsikibha esifekethisiweIsikibha esinophawuizingubo ezinelogoizingubo ezinombhalopoloukumaka imifekethiso ezikibheniizingubo zokumaka izingubo ezinelogo